Dhacdooyinka Layaabka Leh Ee Shaley Ku Lammaanaa Markii Marada Madaw Laga Baddalayay Kacbada Barakeysan Iyo Macluumaad Kacbada Ku Saabsan [+SAWIRRO]
Wednesday August 22, 2018 - 12:20:32 in Wararka by Abdi A.
Makkah-(Caalami-News)-Tirooyin rikoodh ah ayaa maanta oo Isniin ah laga diiwaan galiyey markii marada madaw laga baddalayay Kacbada Barakaysan ee Masjidka Xaramka oo sannad walba wakhtigan oo kale laga baddalo kadib markii ay aad u kordheen tirada sh
Makkah-(Caalami-News)-Tirooyin rikoodh ah ayaa maanta oo Isniin ah laga diiwaan galiyey markii marada madaw laga baddalayay Kacbada Barakaysan ee Masjidka Xaramka oo sannad walba wakhtigan oo kale laga baddalo kadib markii ay aad u kordheen tirada shaqaalihii loo adeegsaday gudashada hawshan qiimaha badan sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka ee sucuudigu oo uu wargeyska Foore idiinka soo turjumay warbixintan.
Waxa aynu qormadan xiisaha leh kaga bogan doonaa macluumaad waafi ah oo la xidhiidha Kacbada, sida looga baddalo Marada Madaw, wakhtiga laga baddalo, masaafada iyo bedka ay ku fadhido Kacbadu iyo macluumaad kale oo xiiso leh.
Hawl-galka maanta oo Isniin ah subaxnimadii hore Marada Madaw ee Kiswada loo yaqaano lagaga baddalayay Kacbada Barakaysan ayaa waxa uu qaatay muddo ka badan 3 saacadood iyo badh ah oo xidhiidh ah oo hawshaasi socotay waana wakhtigii ugu dheeraa ee hawshan la qabtay.
Waxa ka hawl galay baddalaadda marada madaw in ka badan 160 nin oo farsamo yaqaano ah iyo waliba kooxo ka mid ahaa kuwii soo tolay marada kuna soo xardhay aayadaha qur’aanka ah ee ku qoran ee dahabka iyo marada xariirta ah.
Waxa hawshan la fuliyey ka hor wakhtigii salaadda subax waxaana lagaga shaqaynayay qalab casri ah oo wiishash iyo gaadiid ah.
Dhismaha Kacbada Barakaysan ayaa dherer ahaan waxa uu dhan yahay 14 Mitir, waxaanay labadii rukunba isku jiraan masaafo dhan 11 Mitir waxaanay ka kooban tahay Afar rukun. Jihada loo yaqaano Multasim waxa ay isku jirtaa 12.5 Mitir halka jihada uu ku yaallo Dhagaxa Nabi Ismaaciil ay ka tahay 10.5 Mitir iyo jihada loo yaqaano Albaabka Nabi Ibraahim oo masaafadeedu dhan tahay 13 Mitir.
Samaynta Marada Madaw ee Kacbada lagu dado waxa laga sameeyey in ka badan 670 Kiiloo Garaam oo xariir saafi ah. 120 Kiiloo Garaam oo dahab ah. 100 Kiiloo Garaam oo Macdanta Fiddada ah. Halkii Mitir ee Xariir ahba waxa uu ka kooban yahay 100 Kun oo miiq oo dun ah. Guud ahaana wadarta culayska marada Kacbadu waxa ay dhan tahay 1150 Kiiloo Garaam oo lagu farsameeyey in ka badan 23 Mishiin oo casri ah.
Waxa Turjumay: Tifaftiraha Wargeyska Foore